Samsung Galaxy Z Flip 3 Si Wanaagsan: Naqshad Laablaab La Hagaajin Karo, Iska -caabbinta Biyaha, Bandhigga 120Hz, Iyo In Ka Badan | Androidsis
Samsung ayaa samaysay sarkaal cusub oo casri ah oo heer sare ah, waana la joogaa Galaxy ZFlip 3, moobiil isku laaban oo leh astaamo iyo tilmaamo farsamo oo ay ku jiraan Snapdragon 888 gudaha iyo naqshad aad u xiiso badan oo soo jiidasho leh oo aan wax badan kaga hadli doonno xagga hoose.
Terminalkan ma aha mid raqiis ah, sida moobilada kale ee isku laabma ee jiilalkii hore ee shirkadda Kuuriyada Koonfureed aysan ahayn. Si kastaba ha noqotee, tayada ayaa ka dhigaysa mid qiimo leh, maadaama ay la timaaddo kan ugu fiican, kan ugu sarreeya, ama waxa ugu yaraan loo malaynayo qaybo badan oo ka mid ah.
1 Tilmaamaha iyo tilmaamaha farsamo ee Samsung Galaxy Z Flip 3
Tilmaamaha iyo tilmaamaha farsamo ee Samsung Galaxy Z Flip 3
Si loo bilaabo, Samsung Galaxy Z Flip 3 waa moobiil la yimid naqshad isku laaban kaas oo aan ka helno shaashad weyn oo leh diagonal of 6.7 inches oo ah farsamada Dynamic AMOLED 2X. Tani waxay la jaan qaadi kartaa HDR10 +, waxay leedahay qaraar FullHD + ah 2,640 x 1,080 pixels waxayna leedahay heer aad u sarreeya oo cabbirkiisu dhan yahay 120 Hz, wax si weyn loo qaddariyo. Dhanka kale, shaashadda labaad waa guddi 1.9-inji ah oo leh xallinta 760 x 527 pixels.
Dhinaca kale, Telefoonkan wuxuu la imanayaa Qualcomm's Snapdragon 888 awood leh, mid ka mid ah kuwa ugu horumarsan uguna waxqabadka wanaagsan ee soo -saareyaasha xilligan. Waana in chipset-ka processor-ku uu awood u leeyahay inuu ku shaqeeyo saacad ugu badnaan ah 2.84 GHz, marka lagu daro sidoo kale inuu la yimaado Adreno 660 GPU, isagoo ah sideed-core oo ku faanaya cabbirka cabbirka 5 nm taas oo ka dhigaysa mid aad waxtar u leh. shuruudaha isticmaalka tamarta iyo maaraynta.
Waxay ku timaadaa 8GB nooc oo RAM ah iyo 128GB iyo 256GB meel lagu kaydiyo gudaha. Ma laha ballaarinta microSD.
Samsung Galaxy Z Flip 3 sidoo kale wuxuu la imanayaa modul kamarad oo xiiso leh oo ka kooban a 12 MP shidma weyn leh f / 1.8 aperture iyo dugsi sare oo kale oo isna ah 12 MP oo leh fur f / 2.2. Kaamirada 'selfie' ee moobiilkan isku laabma, waxay leedahay qaraar ah 10 MP iyo aperture f / 2.4.
Batariga taleefankani waa mid ka mid ah qodobbada ugu liita, ahaanshaha 3,300 Mah awood, tiradaas, ugu yaraan heerka isbarbardhigga, xoogaa ka liidata kan moobiillada hadda jira, oo u dhexeeya 4,000 mAh ilaa 5,000 iyo, mararka qaarkood, 6,000 mAh. Dabcan, ku -dallacsiinta degdegga ahi ma muuqato maqnaanshihiisa aaladdan, isagoo ah 25 W. Waxaa kale oo jira 11 W xawaaraha ku -dallaca wireless -ka iyo 4.5 W dib -u -dallacaadda.
Astaamaha kale ee casriga cusub ayaa sidoo kale ka mid ah akhristaha farta shaashadda ku jira, Isku xirnaanta 5G, Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6 band band, Bluetooth 5.1, stereo ku hadla, awood u leh inay ku duubaan fiidiyaha ugu badnaan xallinta 4K iyo 60 fps (xirmooyin ilbidhiqsi). Moobilkan waxaan sidoo kale ku leenahay iska caabbinta heerka fasalka IPX8 iyo Corning Gorilla Glass Victus oo ilaalinaya shaashadda.
MUUQAAL Main Dynamic AMOLED 2X oo ah 6.7 FullHD + oo ah 2.640 x 1.080 pixels iyo sare ee 1.9 inji oo leh xallinta 760 x 527 pixels / Corning Gorilla Glass Victus
GOOBKA BADBAADADA GUDAHA 128 ama 256 GB (UFS 3.1)
CHAMBERS Gadaal: Dual 12 + 12 MP / Xagga hore: 10
BATARY 3.300 mAh oo leh 25 Watt Fast Charge oo leh 25 W Fast Charge / 4.5 W Reverse Charge / 11 W Wireless Crga
NIDAAMKA HAWLGALKA Android 11 ee hoos timaada OneUI 3.5
Isku xirnaanta Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6 / Bluetooth 5.1 / NFC / GPS + GLONASS + Galileo / Taageerada Dual-SIM / 5G / 4G LTE
MUUQAALO KALE Akhristaha faraha-shaashadda / Aqoonsiga wajiga / USB-C / Stereo ku hadla / iska caabbinta biyaha IPX8
Samsung Galaxy Z Flip 3 ayaa laga bilaabay suuqa Yurub (Spain waxaa ku jira, dabcan) iyadoo qiimo ah 1.059 euro oo ah nooca leh 8 GB oo RAM ah iyo 256 GB oo ah meel lagu kaydiyo gudaha. Waxaa la iibsan karaa laga bilaabo Ogosto 27, laakiin wuxuu marka hore gaari doonaa suuqa Mareykanka, ka dibna sidoo kale waa la siin doonaa adduunka oo dhan.
Waxay ku timaadaa casaan, cagaar, lavender, madow madow, kareem, noocyo cawlan iyo caddaan ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Samsung Galaxy Z Flip 3 Si Wanaagsan: Naqshad Laablaab La Hagaajin Karo, Resistance Biyaha, Bandhigga 120Hz, iyo Inbadan